It is me. Ko Niknayman.: ဂျာမဏီနိုင်ငံနှင့် သြစတြေလျနိုင်ငံ (ပါ့သ်မြို့ ) တို့ တွင် မြန်မာပြည်အရေးအတွက် ဆန္ဒပြစဉ်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံနှင့် သြစတြေလျနိုင်ငံ (ပါ့သ်မြို့ ) တို့ တွင် မြန်မာပြည်အရေးအတွက် ဆန္ဒပြစဉ်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံ လှုပ်ရှားမှု။ - http://www.mingalar07.blogspot.com/
သြစတြေလျနိုင်ငံ (ပါ့သ်မြို့ ) လှုပ်ရှားမှု။
Posted by Ko Niknayman at 3:00 AM